အောကျတိုဘာ ၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၉ ညနေ News Code : 1075755 Source : ABNA Link:
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်ကြီး၏တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိ နားလည်စေဖို့ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး အကိုးအကားမှာ အရာနှစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ပထမတစ်ခုမှာ သခင်(အ.စ)၏ မဒီနာရွှေမြို့တော်မှကရ်ဘလာ ရွှေမြို့တော် အထိ ခရီးတလျှောက်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယတစ်ခုမှာ သခင်(အ.စ)နှင့် ပတ်သက်သည့် ဇေယာရတ်တော်များ ဖြစ်ပါ သည်။ဤအကိုးအကား နှစ်ခုဖြင့် ပြီးပြည့်စုံလာသည့် အာရူရာ တော်လှန်ရေးကြီး၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်၊ရည်ရွယ်ချက်(၁၀)ချက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် (အာယာသွလ္လာဟ်မကာရေးမ်)ဤစာအုပ်တွင် ထိုရည် မှန်းချက်များ (၁၀)ခုအားအကျဉ်းချုပ်ပြီး တင်ပြပါမည်။သို့သော်လည်းပဲ ဤရည်မှန်း ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်(၁၀)ခု အားမတင်ပြမီအလျှင် ရှေ့ပြေးတစ်ခုကို တင်ပြဖို့အရေး ကြီးပေသည်။
ဤဝါကျ၏ဆိုလိုချက်မှာ-အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်ကြီး၏ အလုပ်များ သည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့ အရေးမကြီးချေဖြစ်ပေသည်။ယေဘုယျအားဖြင့် ဤအုပ်စု အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ ယုံကြည်ထားသည်ဖြစ်ပေမည်။(အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်ကြီးသည် အလုပ်တော်များကို ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခု ကြောင့်ပြုတော်မူသည် ဟုဆိုမည်ဆိုလျှင် လိုအင်ဆန္ဒ ကင်းမဲ့မှု မကင်းသည့်အရှင် ဖြစ်သွားဖို့ လိုအပ်လာပေမည်။
ဆိုလိုသည်မှာ-အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်ကြီးသည် လျော့နည်းမှုများ၊လို အပ်မှုဆန္ဒများ ရှိနေပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိသည့်အလုပ် များကို လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ထိုလျော့နည်းမှုများ၊လိုအပ်မှုဆန္ဒများ ကိုဖြည့်ဆည်း၍ နေရာပြန်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
အမှန်တကယ်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ကြီးသည် ဂနီယိုဗေက် ဇသ်(غنىّ بالذّات) ဖြစ်တော်မူပြီး၊အဖက်ဖက်မှ ပြီးပြည့်စုံတော်မူသည့် အရှင်ဖြစ်တော်မူ ပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ အလုပ်များတွင် ရည် ရွယ်ချက် မရှိချေ။
အဓိပ္ပါယ်။။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် မိုးကောင်းကင် ခုနှစ်ထပ်ကို ဖန်ဆင်း တော်မူသည့် အရှင်ပင် ဖြစ်တော်မူပေသည်။ပြီးနောက် မြေပထဝီကိုလည်း ထိုနည်း တူစွာ ဖန်ဆင်းတော်မူလေ၏။ ဤနှစ်ခု(မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေပထဝီ)အကြား အရှင်၏ အမိန့်တော်များ(တိကျသည့်ဂရုပြုမှုများ) ဆင်းသက်တော်မူလေသည်။အကြောင်းမှာ အသင်တို့အနေဖြင့် အရာခပ်သိမ်းကို စွမ်းဆောင်နိုင် သည့်အရှင် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ စေရန် ဖြစ်သည်။ဧကန်မုချ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ (အေလ်မ်)ပညာရပ် သည် အရာခပ်သိမ်းကိုလွှမ်းမိုး ထားပေသည်။
မနုဿလူသားအားဖန်ဆင်းခြင်း၏ ဖလ်စဖာ(နက်နဲသည့် အကျိုးအကြောင်း တရား)အား စူရာဟ် ဇရီယာသ် အာယတ်တော်(၅၆)တွင် လေ့လာနိုင် ပေသည်။
ကျွန်ုပ်(မိုဟမ္မဒ်(ဆွ))အား စာရိတ္တ၏ ကောင်းမှုများကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် အတွက် စေလွတ်တော် မူခြင်း ခံခဲ့ရပေသည်။
ဤသက်သေ အထောက်အထားကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ တော် လှန်ရေးသည်လည်း အလွန်တရာ အရေးကြီးသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိပေသည်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်လည်း အာရှုရာ၏ အမြဲရှင်သန်နေပြီး ကျန်ရစ်နေရသည့် လျှို့ ဝှက်ချက်ကိုသိရန် အေမာမ်(အ.စ)၏ တော် လှန်ရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရန်လိုအပ်ပေသည်။
၎င်းရည်ရွယ်ချက်များမှ (၁၀)ခုကို သာလျှင် လမ်းညွှန်ပြပါမည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)၏ ဗိုင်အတ်(သစ္စာခံခြင်း)ကို လက်မခံ သဘောမတူချိန် ပြီးနောက် မဒီနာရွှေမြို့တော်အား စွန့်ခွါဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နောက် တိုတိုတုတ်တုတ် သို့သော် အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုချက်ကို အလွန်တရာ နက်ရှိုင်းများ ပြားသည့် သေတမ်းစာများကို စီစဉ် တော်မူခဲ့ပြီး မိမိ၏နောင်တော် မိုဟမ္မဒ် ဟနဖီ ယေကို ပေးအပ်ခဲ့လေသည်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် တစ်ဦးတည်းဆိုင် အေစ်လာ(ဟ်)(ပြုပြင် တည့်မတ်ပေး ခြင်း)ကိုမိန့်တော်မူပြီး မိသားစုဆိုင်ရာ အေစ်လာ(ဟ်)ကို မိန့် တော်မူ လေသည်။
အဓိပ္ပါယ်။။ဟဇရတ်(သ)ရှိုအိုက်ဗ်(အ.စ)မိန့်တော်မူ လေသည်။အို ကျွန်တော်၏လူမျိုး များ ကျွန်တော်အား သတင်းပေးပါလေ။အကယ်၍ ကျွန်တော်ထံ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်ဘက်မှ ပေးထားတော်မူသည့် ထင်ရှားပြတ်သားသည့် သက်သေရှိမည်။ပြီး နောက် ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူ ထားသည့် စားနပ်ရိက္ခာလည်းရှိမည်။(ဤအချိန် ကျွန်တော်အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ၏ အမိန့်တော်အား သွေဖယ် သည့်လုပ်ရပ် လုပ်နိုင်ပါမည်လော?)ကျွန်တော်အနေဖြင့် အသင်တို့ကို လည်း မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ထားပြီး ထိုအလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်အဖြစ်ကို လုံးဝမလိုလားချေ။မိမိ တတ်နိုင်သည့် စွမ်းအားနှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်မှုကိုပြုခြင်းမှာအပ အ ခြားမလိုလား ချေ။(ဤအလုပ်အတွက်)စွမ်းအားသည်လည်း အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ (ကူညီဖေးမမှု)မှအပ မဖြစ်နိုင်ချေ။ထိုအရှင်မြတ် တစ်ဦးတည်းကိုသာလျှင် အား ကိုးအားထားပါသည်။ထိုအရှင်မြတ် ဘက်သို့သာလျှင် ပြန်လှည့်ရပေမည် ဖြစ်ပေ သည်။
အဓိပ္ပါယ်။။ဤပထဝီမြေပြင်၌ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးနောက် ပျက် စီး ပြဿနာ ဖြစ်မှုကို မပြုလုပ်ကြပါနှင့်။ပြီးနောက် ထိုအရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ပြီး၊ မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး တောင်းခံပါလေ။(တာဝန်များ မကျေပွန်မှုကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိုအရှင်မြတ်၏ ရဟ်မသ်အပေါ် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုလုပ်ပါ လေ)။မုချဧကန် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ ရဟ်မသ်တော်(ဂရုနာတော်)သည် ကား ကောင်းမှု၊ကုသိုလ်ပြုလုပ်သူများနှင့် အလွန်တရာ နီးကပ် ပေသည်။
အွန်မသ်(နောက်လိုက်၊နောက်သားများ)တစ်စုသည် စီးပွားရေး၊စာရိတ္တ၊ယုံ ကြည်မှု၊ယဉ် ကျေးမှုနှင့် မေတ္တာထားရှိမှုတို့အတွက် ပျက်စီးမှု ရှိနိုင်ပေသည်။ဤ ကဏ္ဍာ၏အေစ်လာ(ဟ်)ခေါ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ပေးခြင်းဆိုသည်မှာ အထက် ဖေါ်ပြထားသည့် ပျက်စီးမှု၊မကောင်းမှု၊ ပြဿနာဖြစ်စေသောအရာများကို တစ်ခုခြင်း သုတ်သင်ရှင်းလင်းပြီး နဂိုမူလ(ကောင်းမြတ်သည့်) စနစ်သို့ ပြန်ပို့ပေးခြင်း ဖြစ်ပေ သည်။
စာရိတ္တဖေါက်ပြန်သူများကို( لاِتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِبُعِثْتُ)၏အလံတော်အောက် တွင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ပေးတော်မူခဲ့လေသည်။
(ထိုအချိန်အခါတွင်)ကုလားအုတ် လေး၊ငါးကောင်ရှိသူ မည်သူမဆိုအား သေဋ္ဌေး (သူဋ္ဌေး)၊ငွေကြေး၊ ချမ်းသာသူအဖြစ် စာရင်းဝင်လေသည်။တစ်ခု၊တစ်ခုချင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်မှုကို ပြုတော်မူ ခဲ့လေသည်။အကျဉ်းချုပ်၊အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် စနစ်များအားလုံးကို နဂို၊ပကတိ(အကောင်း)အတိုင်း ပြန်လှန်နေရာချ ပေးတော်မူခဲ့လေသည်။
ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသည့် အစ္စလာမ်၏တမန်တော်မြတ် ဟဇရတ်(သ)မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ဝဖာသ် ဖြစ်တော်မူပြီးနောက်၊ခေလာဖသ်(တမန်တော်မြတ်(ဆွ)အရိုက်အရာကို လက်ခံသည့်ကိစ္စ) ဖြင့် မိမိလမ်းမှန်မှ ထွက်သွားလေသည်။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့် မိမိ၏နှလုံးသွေးဖြင့် အကျင့်လုပ်ပေးတော်မူ ခဲ့သည်။စာရိတ္တဆိုင်ရာတန်ဖိုးများ တဖြည်းဖြည်းအရောင်လျော့ပြီး မှေးမှိန်ခဲ့ လေသည်။နေရာမှန်သည် မိမိနေရာမှ တစ်ချို့ ဂျာဟေလီယသ်ခေတ်က ဖျက်ဆီးသူများ၊ဖရိုဖရဲပြု သူများလက်သို့ ရောက်သွားလေသည်။
ဗနီအိုမိုင်ယာနှင့် ဂျာဟေလီယသ်ခေတ်၏ အကြွင်းအကျန် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တဖြည်းဖြည်း အရေးကြီး၊အဓိကကျသည့် အစိုးရနေရာများတွင် နေရာယူလာကြပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ သာဝကတော်များကို အပြင်ထုတ်ခဲ့ကြလေသည်။ပြည်သူပိုင် ဘဏ္ဍာငွေများသည် ကျောသား၊ရင် သား ခွဲခြားပြီး ပေးကမ်းခွဲဝေသည့် အဆင့်သို့ ရောက်သွားလေသည်။
မောင်လာအလီ(အ.စ)အနေဖြင့် မိမိအုပ်ချုပ်သည့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် အွန်မသ်ကို ပြု ပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ပေးရန် အမြောက်အများ ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော် မူခဲ့လေသည်။သို့သော် အုပ်ချုပ်မှု သက်တမ်းတိုတောင်းလှသည့်အတွက် အပြည့်အဝ ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ဖို့ အခွင့်မသာ ခဲ့ချေ။
မောင်လာအလီ(အ.စ) ရှဟာဒတ် ဖြစ်တော်မူ ပြီးနောက် မောင်လာ လက်ထက်တွင် ပြဿနာရှာနေသည့် ဟာကင်မ်(အာဏာရှင်)တစ်နည်းဆိုရလျှင် မိုအာဝေယာ မွတ်စလင်မ်များ၏ ခလီဖွာ သမ္မတဖြစ်လာပေသည်။၎င်းအနေဖြင့် ဟဇရတ်(သ) အဘူဗကရ်နှင့် အိုမရ်ကို ခလီဖွာ သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံသည့် စည်းမျဉ်း၊နည်းလမ်းကိုလည်း အလေးမထားသည့်အထိ ကျောခိုင်း ခဲ့လေသည်။
အမှန်တကယ် ၎င်းအနေဖြင့် ရုတ်တရက် တော်လှန်ရေးဖေါ်ထုတ်သည့် ပုံစံဖြင့် လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုပြုပြီး အာဏာကို သိမ်းခဲ့လေသည်။မိမိအချုပ်အခြာ၏ အခြေခံများ ခိုင်ခံ့အားကောင်းလာရန် အတွက် ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ ရှဟာဒတ်ပြီးနောက် အီရန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါခဲ့လေသည်။ပြီး နောက် ထင်ထင်ရှားရှား ပြောကြားလေ၏။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နမာဇ်၊ရိုဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိပေးနိုးဆော်ရန် လာခြင်းမဟုတ်ချေ။အသင်တို့အပေါ် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်လိုသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။မည်သူမဆို ကျွန်ုပ်အား ဆန့်ကျင်မည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏အသက် ချမ်းသာရာရလိမ့် မဟုတ်ချေ။
ဤအတွက်ကြောင့် တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီး၊ဖရို၊ဖရဲသည့် ခေတ်များသို့ ဗနီအိုမိုင်ယာမှ စတင်ခဲ့ပြီး နှလုံးသားဖြင့် အစ္စလာမ်နှင့်အီမာန်ကို လက်မခံကြပေ။အခြားတဖက်တွင်လည်းမောင် လာအလီ(အ.စ)၏အီမာန်အားနည်းသည့် ဘက်တော်သားများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများ၊ပစ္စည်း များဖြင့် ဝယ်ယူမှုကို စတင်ခဲ့ကြလေသည်။
၎င်း(မိုအာဝေယာ)၏ ဝိုင်းတော်သူ၊ဝိုင်းတော်သားများအနေဖြင့် လူမဆန်သည့် သောင်း ကြမ်းမှုများကို ပြုခဲ့ကြပေသည်။ဤသမိုင်းများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နဲဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်း၊ခွသ် ဗာ(၂၇)တွင် လာရှိပေသည်။လာရှိသည်မှာ-လူမဆန်သည့် သောင်းကျန်းသူများ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ သားအုပ်စုတစ်စုသည် အီရတ်နိုင်ငံမြို့များသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့လေသည်။ပြီးနောက် အလစ်သုတ်ပြီး မြို့နေလူထုအား တိုက်ခိုက်ကြလေ၏။၎င်းတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့လေသည်။၎င်းတို့၏ ပစ္စည်း၊ဥစ္စာများ ကိုမတရား သိမ်းယူကြလေသည်။ဤသို့ပြုခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ အကီဒါ၊ယုံကြည်မှုများ၊တုန်လှုပ်ရန်နှင့် ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)နှင့်ကိုယ်တော်အလီ(အ.စ)၏သား၊သမီးများကို လက်လွတ်ကြရန် ဖြစ် ပေသည်။
အနှစ်ချုပ်ရလာဒ်မှာ ဗနီအိုမိုင်ယာအနေဖြင့် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပေးသည့် လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုဖြင့် ဂျေဟာလသ်ခေတ်က ကိစ္စများကို အသက်ပြန်သွင်းခဲ့လေသည်။
ဟီဂျရီသက္ကရာဇ်(၆၀)ခုနှစ်၊ရဂျဗ်လ(၁၅)ရက်နေ့ကို မိုအာဝေယာဇီဝိန်ချုပ်ပြီးနောက် ၎င်း၏ သားမိုက်၊ယဇီးဒ်(လ.န)ခေလာဖသ်နေရာကို မိမိအဖေကဲ့သို့ အတင်းအဓမ္မ၊မည်သည့် အခြေခံ ဥပဒေ၊စည်းမျဉ်းမျှမရှိဘဲ ယူခဲ့လေသည်။
ပြဿနာများ မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်၊ညှဉ်းပန်း၊နှိပ်စက်မှုတို့သည် ယဇီးဒ်(လ.န) လက်ထက် တွင် ၎င်း၏ဖခင်လက်ထက်ကထက် ပိုပြီးတဆင့်တဆင့် ဆိုးရွားလာလေသည်။အစ္စလာမ်မြို့များ အားလုံး ယုတ်စွအဆုံး မဒီနာရွှေမြို့တော်အထိ ပြန့်နှံ့ခဲ့လေသည်။သို့သော်ဤသည် သဘာဝဖြစ် ပေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူထုသည် မိမိတို့ခေတ်ကာလ၏ ဘုရင်၊အာဏာရှင်နောက် လိုက်ကြပေသည်။
ဘုရင်၊သမ္မတ၊အရက်သေစာသောက်စားမည်။လောင်းကစားပြုမည်။မျောက်နှင့်ကစားမည်။ခွေးနှင့်ဆော့မည်။အတိုချုပ်ဖြင့် ဂိုနာအမျိုးမျိုးတွင် နှစ်မြှုပ်နေမည်ဆိုလျှင် ထိုအချိန်တွင် ပြည်သူ များအနေဖြင့်လည်း ပျက်စီး၊ဖရို၊ဖရဲဖြစ်နေသည့် အကီဒါများ(ယုံကြည်မှုများ)လူမှုရေး၊စာရိတ္တဆိုင် ရာ ပျက်စီး၊ဖရို၊ဖရဲဖြစ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ယဇီးဒ်(လ.န)၏ညှဉ်းပန်း၊နှိပ်စက်မှုများ၊အနိုင်ကျင့်မှု များနှင့် လူမဆန်မှုများအတွက် ဤ(အောက်ဖေါ်ပြမည့်အချက်)သည်ပင် လုံလောက်ချေသည်။
စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် မဒီနာရွှေမြို့တော်မှ ဆီးရီးယားသို့ ခရီးထွက်ပြီးနောက်၊မဒီနာ ရွှေမြို့တော်မှ သုတေသီ၊စိစစ်မှုပြုပြီး ပြန်လာလေသည်။မိမိ၏ အစီရင်ခံစာတွင် မဒီနာရွှေမြို့တော် သူ၊မြို့တော်သားများကို ပြောဆိုမှုကို ရေးသားထားလေသည်။ပြောဆိုသည်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်သခင်၏ ကစမ် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အခုအချိန် ယဇီးဒ်(လ.န)အနားမှ အပြင်ခရီးထွက်လာကြ ပါသည်။(သူအနားမှာရှိချိန်)(သူ၏များပြားလာသည့် ဂိုနာ၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်များ၏ အာနိသင်ကြောင့်)မိုး ကောင်းကင်မှ ခဲမိုးကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ရွာချမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့် ခဲ့ရပါသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်အနေဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ဝဖာသ်ဖြစ်တော်မူပြီး အချိန်မှအချိန်အကြာကြီး ပျက်စီး၊ဖရို၊ဖရဲဖြစ်ခဲ့သည်။လူအသိုင်းအဝိုင်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့် မတ်ရန် နီယသ်ဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)ထံ ဘိုင်အတ်မပြုဘဲ၊လက်မခံခဲ့ချေ။ပြီးနောက်တစ်ဦးတည်းဘဝ နှင့်လူမှုရေးဘဝအတွက် ဖြစ်သောလိုအပ်သည့် အရေးကြီးနဂိုစနစ်ကောင်းကို ပြန်လှည့်ပေးရန် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) လက်ထက်ကဖြစ်ရပ်မှန်များ၊စွန္နတ်တော်များကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လေသည်။
အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်အနေဖြင့် ဤကြီးကျယ်သည့်အလုပ်အတွက် ရှောင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် မုချဧကန် ယနေ့ အစ္စလာမ်ဆိုသည့် သတင်းပင်ကြားရတော့မည်မဟုတ်ချေ။အကယ်၍ရှိခဲ့လျှင်လည်း ဂရုစိုက်ဖို့မလိုသည့်အစ္စလာမ်ဖြစ်ပေမည်။
ဤလမ်းစဉ်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်အနေဖြင့် ရှဟာဒတ်ဘွဲ့ ကို ခံယူခဲ့သည်မှာ မှန်ပေသည်။သို့သော်အစ္စလာမ်မီ အသိုင်းအဝိုင်းကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီး ဤရည်ရွယ်ချက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်မှုနှင့် နီးစပ်လာလေသည်။
ကိုယ်တော်(အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ))၏နောက်လိုက်၊နောက်သားများ၊အချစ်မေတ္တာထားသူများ၊လမ်းစဉ်လိုက်သူများအနေဖြင့် စစ်မှန်သည့် အချစ်မေတ္တာထားမှုနှင့် နောက်လိုက်ပီသမှုကို သက်သေပြဆိုရန်အတွက် မိမိတို့၏လက်ရှိခေတ်ကာလ၏ ပျက်စီးမှုများ၊ပြဿနာများကို စဉ်းစား ပြီး၊တွေးခေါ်ပြီး၊စွမ်းအားရှိသည်နှင့်အမျှ ၎င်း(ပျက်စီးမှုများ၊ပြဿနာများ)ကိုတော်လှန် ချေမှုန်းရပေမည်။
အဇာဒါရီပြုသူများအနေဖြင့် အချိန်အခါတိုင်း၊လောဂျစ်ကျသည့် စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ပေးမှုများ စည်းစနစ်ကျကျ၊ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိ ပျက်စီးမှုများ၊ပြဿနာများ၊မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက်အသိုင်းအ ဝိုင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ပေးမည်ဆိုလျှင် ကြီးမားသည့် စဝါဗ်ကြီးသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကို ယုံကြည်ရပေမည်။အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးရရှိရလိမ့်မည်။
လေးစားအပ်သည့် တရားဟောဆရာများ၊ချစ်ခင်ရပါသည့် ချီးမွမ်းထောမနာပြုသူများ (နောင်ဟာဖတ်သူများ၊ကစီသာဖတ်သူများ…)အနေဖြင့် မလွဲမသွေ ဤမွန်မြတ်လှသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သာသနာ့ပြု၊နိုးဆော်ရပေမည်။ဤမဂျလစ်တော်များတွင် တက်ရောက်နေရာယူသူများအား စရိတ္တနှင့် လူမှုရေးအား ပျက်စီးစေ၊မကောင်းမှုဖြစ်စေ၊အမင်္ဂလာများ ဖြစ်စေသည့်အ ကြောင်းအရာများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်မှုဖက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ရပေမည်။အကယ်၍ မိမိတို့၏ မိသားစုများမှ(ဤလုပ်ငန်းကို)စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ပို၍ပင်ကောင်းလေစွ။
(စာရှုပရိတ်သတ်များ) သိထားကြသည့်အတိုင်း ရီဝါယတ်တော်များ ဖိုကာအာ(မရ်ဂျယေသက္က်လီးတော်များ)၏ သောင်ဇီးဟွလ်မဆာအေကျမ်းများတွင် လာရှိ သည့်အတိုင်း အမရ်ဗေမအ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ် အဆင့်သုံးဆင့် လာရှိပေသည်။ ၎င်းအဆင့်(၃)ဆင့်အား ဂရုပြုရန် အရေးကြီးပေသည်။ရီဝါယတ်တော်များနှင့် ပတ် သက်ပြီး ဝစာအေလွရ်ှရှီအာကျမ်းအတွဲ(၁၁)၊အလ်အမရ်ဝါအန်နဟီး ကဏ္ဍအခန်း(၃) တွင် လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နှလုံးသားအနေဖြင့် ကောင်းမှု၊ကောင်းရများအား ချစ်သူ၊မေတ္တာရှိသူဖြစ်ပြီး မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုများ အားမုန်းသူ၊ရန်သူ ဖြစ်ရပေမည်။
ကောင်းမှုများ၊ကောင်းရာများကို အတွင်းပိုင်း(နှလုံးသားဖြင့်)ချစ်ခြင်း၊မြတ်နိုး ခြင်းနှင့် မကောင်းမှုများ၊မကောင်းရာများကို နှလုံးသားဖြင့် မုန်းတီး၊ရွံရှာခြင်းကို နှုတ် ဖြင့်ထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။မကောင်းမှုများ၊မကောင်းရာများကို ပြုလုပ်သူများ၊ကောင်းမှုများ၊ကောင်းရာများကို လျစ်လျူရှု၊ဂရုမပြုသူများအား မိမိ၏နှုတ်ဖြင့် အ ကယ်၍ ရန်ဖြစ်ခြင်း၊မာနတရားမရှိဘဲ၊သူတစ်ပါး၏ခံစားရမှုများကို ထိခိုက်အောင်ပြု ခြင်း မရှိဘဲ မိမိ၏ရှေ့ရှိသူအား သတိပေး၊အသိပေးနိုးဆော်မည်ဆိုလျှင် မုချဧကန် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တွေ့ရလိမ့်မည် ဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်(သို့)အများအနေဖြင့် ထင်ထင်၊ရှားရှား လူပတ် ဝန်းကျင် အသိုင်း၊အဝိုင်းတွင် မကောင်းမှုများ၊ပြစ်မှုဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်မည်၊ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများ၊ကောင်းမှု၊သုစရိုက်များကို မထီမျက်မြင်ပြုပြီး၊စော်ကားမည်၊ လက်လွတ်မည်၊ပြီးနောက် အခြားသူများ၏ အသိပေးပြောဆိုမှုကိုလည်း ဂရုမပြုမည် ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ အစ္စလာမ်မီ၊အစိုးရ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့အားဖမ်းချုပ် ခြင်း၊အပြစ်ပေးခြင်း တို့ကိုပြုပေမည်။
အကယ်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးမဆင်နွဲခဲ့မည် ဆိုလျှင် ဗနီအိုမိုင်ယာနှင့်၊ဂျဟေလီယသ်ခေတ်ကျန်များ၊အရှက်သိက္ခာမဲ့မည် မဟုတ် တော့ချေ။ထိုအချိန် အစ္စလာမ်အတွက် မည်သည့်(အန္တရာယ်)တွင်ကျရောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း(စာရှုသူ)သိရှိနားလည်ပေမည်။အကယ်၍ရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင်လည်း အန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် သီးနှံကောင်းကောင်းမွန်မွန် မပေးနိုင်သည့် လယ်ယာ နှင်တူသွားပေမည်။
အရေးကြီးသည့် အစ္စလာမ့်သမိုင်းတွင် ကဏ္ဍာများမှတစ်ခုမှာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကရ်ဗ လာပြီးနောက် တော်လှန်ရေးများပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးများမှာ အနှိုင်းမဲ့သောင်ဝါဗီး(န)တော်လှန်ရေး၊မိုခ်သာတော်လှန်ရေး စသည်ဖြင့် ဤတော် လှန်ရေးများအားလုံး၏ ညာသံမှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး ထိုညာသံမှာ(لاِلِ مُحَمَّداَلرِّضَا) (အာလေမိုဟမ္မဒ်(အ.စ)၏နှစ်မြို့မှုအတွက်)ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ဩဝါဒတော်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဇာဒါရီ များ ကျင်းပနေသည့်အပြင် ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများ ညွှန်ကြားခြင်းကို ကျယ်ပြန့်စေ ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများကို ကုန်စင်အောင် တိုက်ထုတ် ပေးရမည်ဆိုသည့် မလွဲမသွေသမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်ကြောင်းသင်ခန်းစာကိုမီးမောင်း ထိုးပြနေပါသလော?
လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်ကာလတွင်လည်း အစ္စလာမ်တည်းဟူသော် လယ် ယာအတွက် ရေသွင်း၊ရေထည့်ပေးခြင်း၊ရေလောင်းပေးခြင်းဆိုသည့် ကောင်းမှု၊ကောင်းရာများကို ညွှန်ကြားပေးခြင်း၊နှင့်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းအလုပ် ဆိုသည့် မကောင်းမှု၊မကောင်းရာများကို တားမြစ်ခြင်းသည် အရေးကြီးလိုအပ်ပေ သည်။
اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلىالله عليه وآله ( فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْوَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْاُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوااَمْرِي، اَهْدِكُمْسَبِيلَ الرَّشادِ
ပိုမိုပြီး အကျယ်တဝင့် လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် သဖ်စီးရ်နမူနာကျမ်းအတွဲ(၂၇)၊ စာမျက်နှာ(၂၇၅)တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ စစ်မှန်သည့်ကိုယ်စားလှယ်တော်နှင့် ခလီဖွာယေဗေလာဖွာဇ်လ်(ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)ပြီးနောက်ချက်ချင်းကြားတွင် မည့် သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမရှိဘဲ၊ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြတ်အလ္လာဟ်ဖက်မှ ခန့်အပ်ခံ ရသည့်ကိုယ်စားလှယ်တော်)မောင်လာအလီ(အ.စ)ကိုယ်တော်တိုင်ယုတ်စွအဆုံးလို အပ်နေသည့်၊အကူအညီလိုနေသည့် မိမိ၏နောင်တော်ဟဇရတ်(သ)အကီးလ်အား ပြည်သူပိုင်ဘဏ္ဍာငွေမှပင် မကူညီခဲ့ချေ။
အားဟဇရတ်(သ) အလီ(အ.စ)အတွက် ကျရောက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊အေဗ်နေမွလ်ဂျင်(န)(လ.န)အ တွက်ကျရောက်လာကြောင်း၊ပြီးနောက်အာယတ်တော်
အားဟဇရတ်(သ) အလီ(အ.စ)အတွက် ကျရောက်လာသည်ဟုရေးသားထား ပေသည်။အမှန်တကယ် အထက်ပါအာယတ်တော်သည် သဖ်စီးပညာရှင်များ၏အ ဆိုအရ(အစ်နစ်ဗင်ရှရီးက်)အတွက်ကျရောက်ခဲ့ကြောင်းရေးသားထားပေသည်။၎င်း (အစ်နစ်ဗင်ရှရီးက်)သည် မိုနာဖေက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏လက် ထက်တွင် ပြစ်မှုဒုစရိုက်များ ကျူးလွန်ခဲ့ပေသည်။
အမှန်တရားနှင့်အမှားမတရားကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင် အမှန်တရား နှင့်အမှားမတရားဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်အကြောင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)မှ ထို (အထက်ဖေါ်ပြပါ)ခွသ်ဗာတွင် လမ်းညွှန်ပြထားတော်မူပါသည်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ် အာန်၌(ဤအမှန်တရားနှင့်အမှားမတရားတို့ပတ်သက်နေသည့်)အဖြစ်အပျက်အား အပြည့်အစုံ၊အကျယ်တဝင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ၎င်းမှအချို့ဗဟို အချက်အချာကျမှုကို ညွှန်ပြပါမည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။သောင်ဟီးဒ်၊တစ်ပါးတည်းအတုမဲ့အရှင်ကို ခဝပ် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်းသည် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး အမှန်တကာ့အမှန် ဆုံး စကြဝဋ္ဌာ၏ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည် ဟက်(က)အမှန်တရား ဖြစ်ပေသည်။ရှေးရ်က်နှင့်ရုပ်ထု၊ဆင်းတုကိုးကွယ် ခြင်းသည်ဗာသွေလ်(ခ)အမှားမတရား ဖြစ်ပေသည်။ဤသို့ဖြင့် ဒဲဟ်ဟေဖဂ်ျရ်အင် ကေလာဗ်ဗေအစ္စလာမ်မီအီရန်(အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ))ပြင်သစ်မှ အီရန်သို့ပြန်ရောက်လာသည့်နေ့မှ လွတ်လပ်ရေးရသည့်အထိ ကြာမြင့်သည့်(၁၀)ရက်တာကာ လ)တွင်အထက်ဖေါ်ပြပါ အာယတ်တော်အား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်ခါ၊ထပ်ခါ၊ ရွတ်ဆိုကြပေသည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားသူကြီးများအနေဖြင့် မက်သဗ်ဗေအာရှုရာမှ သင် ခန်းစာယူထားမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်ကွဲလွဲမှုအတွက် ဖြစ်ပါစေ၊အသေးတကာ့၊အ သေးဆုံးဟက်(က)အမှန်တရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက် အမိန့်ထုတ်ပြန်မည် မဟုတ်ချေ။ ယုတ်စွအဆုံး မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စေ(သို့)လာဘ်ပေး၍ဖြစ်စေ၊အမှန်တရား၏ဆန့်ကျင်ဖက် အမိန့်ပေး၍ ရမည်မဟုတ်ချေ။
အကယ်၍တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမည်။အစ်ကိုများ၊မောင်များအနေ ဖြင့် အစ်မများ၊ညီမမျး၏ ရပိုင်ခွင့်အမွေကို ၎င်းတို့အားမပေးဘဲစားသုံးခဲ့မည်ဆိုလျှင် (သို့)အစ်ကိုကြီးမှ ညီငယ်များ၏ ရပိုင်ခွင့်အမွေကို မပေးမည်ဆိုလျှင်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို မသိရှိ၊မနားလည်၊သဘောမပေါက်သေးသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
ဗနီအိုမိုင်ယာအုပ်ချုပ်သည့်လက်ထက်တွင် ဂျဟ်လ်၏ကျယ်ပြန့်၊ပြန့်နှံ့မှုကို မ တင်ပြမည် ဂျေဟာလသ်၏ အမျိုးအစားများကို ရှင်းပြဖို့ အရေးကြီးပေသည်။ဂျေဟာ လသ်၊နဒါနီ(အသိဥာဏ်၊ပညာမဲ့မှု၊မသိနားမလည်မှု)သည် တခါတရံ အကြောင်းအ ရာနှင့် ပတ်သက်နေပြီး တစ်ခါတလေ ရှရီအီအမိန့်နှင့် ပတ်သက်နေပါသည်။တစ်ခါတလေ ရှရီအီအမိန့်နှင့် ပတ်သက်နေသည့် ဂျေဟာလသ်သည် တစ်ခါတရံ ကူစူရ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကိုသိဖို့ပြုရန် မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတလေ ဂျေဟာလသ်သက်စီးရ်(အဟ်ကမ်ကိုဆည်းပူးနိုင်လျက် ပေါ့လျော့ပြီး မဆည်းပူးသည့်အခြေအနေ)ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ဗနီအိုမိုင်ယာသည် ဂျာဟေလီယသ်ခေတ်က အကြွင်း၊ အကျန်များဖြစ်ကြောင်း၊အစ္စလာမ်သာသနာ့တော်နှင့် ကာလရှည် ရန်ငြိုး၊ရန်စရှိ ကြောင်း၊ယခုတိုင် ဗဒဲရ်စစ်ပွဲ၊အိုဟွဒ်စစ်ပွဲ၊အဟ်ဇာဗ်စစ်ပွဲများတွင် မိမိတို့၏ဆွေမျိုး ရင်းချာများ အသတ်ခံခဲ့ရသည့်၊ခါးသီးသည့်၊အဖြစ်အပျက်အား မမေ့သေးဘဲ (အစ္စလာမ်ဆီမှ)သွေးကြေးပြန်ဆပ်ဖို့၊အခွင့်အလမ်းစောင့်လှမ်းနေကြောင်း မသိပါသ လော?
ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အရေအတွက်များစွာသော ရီဝါယတ်တော် များ၊ထို့ပြင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့်မရ်ဝန်ဗင်ဟေကမ်တို့၏ အပြန်အလှန် စကားပြောမှုများတွင် ပေါ်လွင်ခဲ့ပေသည်။ထိုညကိုအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ဒါရွလ်အေမာရေဟ် မဒီနာ(မဒီနာရှိအစိုးရရုံးချုပ်)ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး၊မိုအာဝေယာ၏ ဇီဝိန် ချုပ်သည့် သတင်းပေးခဲ့လေသည်။ပြီးနောက်ယဇီးဒ်ထံ ဗိုင်အတ်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့ လေသည်။ကိုယ်တော်(အ.စ)အနေဖြင့် သဘောမတူခဲ့တော်မူပေ။ပြီးနောက်၊နောက် တစ်နေ့တွင် မရ်ဝန်အနေဖြင့် အေမာမ်(အ.စ)အား လမ်းကြားတစ်ခုတွင်တွေ့ခဲ့လေ သည်။
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَىالاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَوَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله ) صلى اللهعليه وآله ( يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلىآلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذارَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوابَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُاَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوافَابْتَلاهُمُاللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ
အချို့ပြောကြပေသည်။ယခုခေတ်အချိန်၊အခါတွင်လည်း အစ္စလာမ်မီနိုင်ငံထူ ထောင်ပြီးပီ ဖြစ်သော်လည်းပဲ မကောင်းမှုများ မနည်းသွားချေ။သို့သော်လည်းပဲ ၎င်း တို့အနေဖြင့် အချက်တစ်ချက်ကို မေ့နေလေသည်။အကယ်၍အစ္စလာမ်မီတော်လှန် ရေး မပေါ်ပေါက်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစ္စလာမ်မီအချုပ်၊အချာအာဏာရှင်အစိုးရကို မ တည်ထောင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဘာဖြစ်သွားခဲ့မည်နည်း အကယ်၍ ဒုစရိုက်များ၊မကောင်း မှုများကို ပြုလုပ်သည့်မကောင်းသည့်အစိုးရ၊ပဲဟ်လစီအစိုးရ၊ရှားအစိုးရ(အစ္စလာမ် အမည်ခံအစိုးရ)ထိုအတိုင်းရှိနေမည်ဆိုပါက အိမ်တိုင်း၊အိမ်တိုင်း(မကောင်းမှု၊ဒုစရိုက် ညစ်ညမ်းမှုများ၊စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများကို အများအပြားနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့်)စ လောင်းလိုင်းများနေရာယူထားပြီး ဖြစ်နေခဲ့ပေမည်။မကောင်းသည့်ဆိုဒ်များ၊အား လုံးလက်ထဲတွင်(လွတ်လပ်စွာ)ရှိနေပေမည်။မိုဘိုင်းများ၊sms များ၊ဗလူးတို့စ်များဖြင့် ပြန့်နှံ့နေသည်။မကာင်းမှု၊ဒုစရိုက်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ရုပ်မြင်သံ ကြားအစီအစဉ်များအားလုံးနှင့် အခြားသတင်းဌာနများတွင်လည်း မကာင်းမှုများ၊ဒုစ ရိုက်မှုများ၊ညစ်ညမ်းမှုများကို ထုတ်လွှင့်နေမည် ဖြစ်ပေသည်။
 بحارالانوار، ج 100، ص 80 ; تحف العقول، سخنان امام حسين(عليهالسلام)، اوّلين سخن
 ص480التحفة السنيّة، ص 79; اضواء على الصحيحين، ص 286; و الانتصار للعاملى، ج 6،